Maraoka: Lalàna Momba Ny Fanomezana Anarana, ny Lohataona Mangina Sy Ny Mozika Sufi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2017 3:32 GMT
Somary nangingina hafahafa ny tontolon'ny bilaogy Maraokana tamin'ity herinandro ity raha niakatra ny maripàna ary navoaka tany amin'ny nampirimana azy ny kapa. Nanazava ny zava-niseho tamin'ny lohataona tao Fez i Everything Morocco, manoritsoritra ireo sakafon'ny vanim-potoana mafilotra:
Mitondra mpizahatany ihany koa ny lohataona ao Maraoka. Maryam ao amin'ny My Marrakesh miresaka momba ny lamaody lohataona any Maraoka mandritra izany, ary manome torohevitra tsara ho an'ny mpizaha tany mikasika ny fomba fitafy. Miresaka ny djellaba Maraokana izy, manoritsoritra azy io ho “akanjo lava misy satroka Maraokanina izay manamarika ny Star Wars. (Ahem, nangalatra ny aingam-panahy amin'ny endrika (style) avy any Maraoka ny horonantsary).” Niteraka adihevitra kely teo amin'ilay bilaogera Maraokana Amine ao amin'ny Label Ash ny toro-heviny ho an'ny vahiny (Tsy fitafy sahaza isan'andro ny kilaoty fohy sy zipo fohy”) :
Taamarbuuta ao amin'ny The Morocco Report nanoratra fanehoan-kevitra fohy momba ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Holandy: Ireo zazakely Maraokana mahazo anarana neken'i Maraoka ihany” avy amin'ny bilaogy Islam in Europe izay nilaza fa manome ny lisitr'ireo anarana neken'ny governemanta Maraokana ho an'ireo ray aman-dreny Maraokanina vaovao rehefa te hanao ny sora-pahaterahana ireo kaominina Holandey
Bilaogera mpiteny Frantsay Ibn Kafka namaly tao amin'ny fanehoan-kevitry ny lahatsoratra fa misy ny hadisoana amin'ny fizotran'ny fanomezana anarana:
Nanohitra i BO18, nilaza fa “tsy mandrakitra ny anaran'ny zanakao ny kaonsily ao Amsterdam raha tsy efa nosoratanao tao amin'ny filan-kevitry ny tanàna Holandey misy anao izy. Ary tsy hanoratra ny zanakao izy ireo raha tsy ahitana anarana “Miozolomana” ny taratasy fanamarinana Holandey. Noho izany dia tsy ho vitan'ny ray aman-dreny Maraokana mihitsy ny manoratra ny zanany any amin'ny firenena roa tonta amin'ny anarana tsy Miozolomana.
Ny lahatsoratra farany sady tsara marihana tamin'ity herinandro ity dia ny lahatsoratra avy amin'ny The View From Fez miresaka ny lanonam-panokafana ny Festival Sufi ao Fez amin'ny alalan'ny sary. Midera ny fetibe ny fijerin'i Samir, milaza fa “hita tao ny zava-mifanohitra mahatalanjona antenain'ny olona ho hita ao Fez – mpiangaly mozika manao akanjo ambony ambany (costume), rano miboiboika maneno, lehilahy manao akanjo mizara ranom-boasary eny an-tànan'ny vahiny sy ny zava-drehetra miasa toy ny famantaranandro!”